Vavaka hampandamina ny vady. ? [Hiverina ny fanambadianareo]
Vavaka amelezana ny vadyNy fitazonana ny firindrana any an-trano dia asa sarotra foana ary indraindray mitaky fanampiana avy amin'Andriamanitra. Vavaka entina hanondrotana ny vadiny mitondra faharetana, milamina ary mandanjalanja amin'ny fitiavanao.
Ny olona tsirairay dia samy mihetsika amin'ny toe-javatra sarotra amin'ny fiainana. Raha miatrika adin-tsaina maro any am-piasana ny vadinao na tsy mandeha araka ny nomaniny ho azy, dia lazao io vavaka io mba hampitony ny vady manahirana.
Matetika ny zava-manahirana rehetra amin'ny fotoan-tsarotra dia miteraka ny tontolo iainana. Raha sendra tafahoatra ny filan'ny sakaizanao, dia tonga ny fotoana tokony hitranga aminao.
Amim-pinoana dia ho afaka hamerina ny firindrana ao an-trano sy ho sambatra kokoa ny tokantranonao.
1 Vavaka amelezana ny vady
2 Ny vavaka hamitana ny vady maika
3 Ny vavak'i Saint Amanso hampahery ny vadiny
4 Vavaka ho an'ny vady andevo - Saint Tame
5 Vavaka ho an'ny vady andevo - Saint Catherine
6 Ahoana no fomba hivavahan'ny vavaka hamitahana ny lahy
“Tompo ô, miditra eo anatrehanao aho izao. Lehibe ny Tompo, mahery ny Tompo, iray ny Tompo Tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy ianao ary ianao irery ihany no afaka manampy amin'ny fahombiazako ny fanambadiako. Ampio ny vadiko ho lehilahy tsara kokoa, ho tony kokoa, ny hanajako ahy, manaja tsara kokoa ahy sy ny zanakay. Izy io dia mampianatra azy ny fomba hanatsarana ny vady, amin'ny maha ray, amin'ny maha loham-pianakaviana azy. Tiako ho fahombiazana ny tokantranoko saingy toa mahakorontana ny fifandraisanay izany fahasarotana izany. Ary omeo fahendrena aho mba hahafahako miatrika ny vadiko amin'ny finiavana hahita ireo toetrako ary mahazo aingam-panahy mba hivoatra, ho malefaka kokoa, tsy ho tezitra, ho tia namana ary ho namana maro kokoa. Misaotra mialoha mialoha amin'ny tso-drano azoko. Ary manontany anao indray aho mba hampianatra ahy ny fomba tokony hihetsika miaraka aminy hanova ny làlany. Amen.
Ny vavaka hamitana ny vady maika
Azonao fantarinao ny fitarainana ateraky ny foko.
Izany dia mety hahatsapa ny fitiavana tsapako (ohatra, ny anaran'ilay olon-tiana).
Miangavy anao aho, ampio aho handresy (ambaraoty ny anaran'ilay olona malalanao) azo antoka, satria (ambarao ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao) ary tsapao fa mety hamoy anao mandrakizay aho!
Mandrosoa ho ahy, amboary ny fonao izay hitanao toy ny vato!
Na dia ny ampondra masiaka aza efa nofafazanao anao, dia fantatro fa azo atao ny fangatahako. Amen.
Ny vavak'i Saint Amanso hampahery ny vadiny
Vavaka ho an'ny vady andevo - Saint Mark
«(Lazao eto ny anaran'ilay olona tianao ho tony),
Enga anie i Saint Mark hampitony anao ary hampamaivana izany fahatezerana sy fahavinirana izay nataonao lalanao izany, izay manalefaka ny fanahinao sy ny fanahinao.
(Lazao eto ny anaran'ilay olona te ho tony).
I Saint Mark dia nanisy liona, bibilava ary zavaboary tsy hay toha ary noho ny heriny dia afaka mamono azy koa izy, mahay ny fahatezerany, ny fahatezerany ary ny fihinany rehetra.
San Marcos afaka hikasika ny fonao, manjary malefaka kokoa sy maivana kokoa.
Hikasika ny fanahinao izany ary hanafaka azy amin'ny fahatezeranao rehetra ary ny fikomiana rehetra izay entiny.
Dia hahatonga ny vatanao ho maivana kokoa, malalaka kokoa ary tony.
Hampiasa ny heriny rehetra i Masindahy Mark hampitony anao ary hanafoana ny hatezerana rehetra hatrizay nahaterahanao. Hanafoana an'io marika mahatsiravina io ianao amin'izay hoe olona hafa ianao, olona tsara kokoa sy milamina kokoa.
(Lazao ny anaran'ny olona tadiavinao hampitony).
Mianiana amin'i Jesosy Kristy aho fa nitondra ny hazofijaliana be dia be izy fa hifaly sy hanjaka amin'ny indray mandeha ary ho an'ny rehetra, fa ho olona hafa izy manomboka izao ary tsy hahatsiaro tena ho sahiran-tsaina toy ny teo aloha.
Horoahinao indray mandeha izao ny hatezerana rehetra ary ho olona tsara kokoa sy tony ianao.
Vavaka ho an'ny vady andevo - Saint Tame
«(Lazao ny anaran'ny vady mitebiteby),
Enga anie i Saint Meek hanamarika anao, enga anie i Saint Meek hampitony anao ary enga anie i Jesosy Kristy hampalefaka anao.
Enga anie i Saint Tame hanafoana izany fahatezerana sy hatezerana izany izay mamoaka indraindray ireo olon-dratsy.
(Lazao ny anaran'ilay lehilahy manototra),
Hitondra ity fahatezerana haingana ity i Saint Meek ary esory. Alefaso ny olanao rehetra ary araho amin'ny fahatezerana rehetra miaraka aminy.
Enga anie ny Saint Tame mahery sy hendry hanaisotra ilay ody ratsy izay mampalahelo ny ankohonanao ary mandre anao malahelo.
Hanasitrana anao i Saint Tame, hanafoana izany fahatezerana rehetra izany, ny fahorianao rehetra ary hahatonga anao hatanjaka kokoa hiatrika ny olanao rehetra tsy ho tezitra sy ho tezitra amin'ny antony tsy misy antony.
Saint Tame, manasitrana ny hatezeran'ny vadiko rehetra, mamono azy amin'ny fotoana sarotra sy manahirana indrindra amin'ny fiainany.
Ampio ny fanahinao, ny olonao sy ny toetranao mba ho mora kokoa sy hiaritra ireo zavatra ratsy ho avy.
Saint Tame dia hampandamina anao, hampitony anao ary hanala ireo zava-dratsy rehetra anananao.
Vavaka ho an'ny vady andevo - Saint Catherine
"Santa Catarina, ianao izay efa nijaly mafy tamin'ny fiainanao, ianao izay nandia izay tsy mendrika handalovanao, mangataka aminao aho hijery ao anatiny sy ny fianakaviako ary ampio aho amin'ny vadiko (hoy ny anaran'ny vadin'ny vadiko).
Tena kivy be izy, tezitra be ary mora tezitra, ary fantatro fa tsy afaka ny ho sambatra aho.
Mikasa ny hanandrana aho, ary iray ihany, dia mangataka aminao aho mba hanampy ahy hampitony.
Mampitony ny vadiko Santa Catarina, mampitony ny fony, mampitony ny eritreriny.
Manampy anao hiatrika ireo fotoan-tsarotra indrindra eo amin'ny fiainanao, indrindra ireo tena mahasosotra indrindra, ary manakana ny oronao tsy hipoaka isan'andro, isan-alina sy isa-minitra.
Manome fitoniana ao am-ponao izany, manome anao fanamaivanana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po ary manala ireo eritreritra ratsy rehetra ao an-dohanao izay mahatonga anao mikorontana.
Ampio aho amin'ity andro mahatsiravina ity Santa Catarina.
Ampianaro aho, ry fianakaviako ary ny vadiko, mba hahafahantsika mifaly marina amin'ny farany.
Mino anao ry Santa Catarina aho. Amen.
Ahoana no fomba hivavahan'ny vavaka hamitahana ny lahy
Ny vavaka ao an-tokantrano atolotra eto dia azo atao am-bavaka na misaraka. Rehefa mivavaka izy ireo dia ho tony rehefa mangataka fanampiana hanomezana toky ny vadiny.
Raha te-hiteny amin'ireto olo-masina samihafa ireto vavaka ireto dia tsy misy olana. Tsara na dia tsara izany satria hampitombo ny fahatsaran'ny fangatahanao.
Ny vavaka atao mba hampamelombelona ny vady dia azo atao isan'andro. Ny tsara indrindra dia tokony ampidirinao amin'ny fotoana manokana amin'ny fanazaran-tena ataonao izany mba hahatsiarovanao ny mivavaka foana. Arakaraka ny hivavahanao no mampitombo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra.
Rehefa mivavaka mba hanamaivanana ny vady ianao dia tsy maintsy manana finoana lehibe ary mino fa ny Tompo dia hiasa mba hahatonga ny vadinao ho tony kokoa sy tony, na inona na inona toe-javatra iainanao.
Saingy mitandrema: mandaitra fotsiny ny fehezanteny iray raha tsara ny tanjony. Raha te hampitony ny vadinao hahomby amin'ny fanambadianao ianao, ary lasa lehilahy tsara kokoa izy, dia eo amin'ny lalana marina ianao.
Fa raha te hampitony ny vadinao ho tonga mpanompony ianao dia fantaro fa tsy hitrona io vavaka io. Ny vavaka atao mba hanala baraka ny lehilahy ihany no miasa rehefa tsara ny fikasana ao am-pony.
Ankafizo ny mampiditra an'io vavaka io ao amin'ny làlanao mahazatra ary mandro amin'ny horonan-tsary manaraka izay hitondra fiadanana ho an'ny fianakavianao.
(nilentika) https://www.youtube.com/watch?v=dS5XLaNQMww (/ naka)
Ianaro koa ny vavaka mba hamerenana ny fanambadiana.